Tag: fampiantranoana podcast | Martech Zone
Tag: fampiantranoana podcast
Aiza no hampiantranoana, Syndicate, hizara, hanamafisana, ary hampiroborobo ny podcast anao
Zoma Janoary 22, 2021 Alahady, Martsa 7, 2021 Thomas Brodbeck
Tamin'ny taon-dasa dia ny taona no nipoaka malaza ny podcasting. Raha ny marina dia 21% ny Amerikanina mihoatra ny 12 taona no nilaza fa nihaino podcast tamin'ny volana lasa, izay nitombo tsy nitsaha-nitombo isan-taona noho ny fizarana 12% tamin'ny 2008 ary hitako nitombo hatrany io isa io. Ka nanapa-kevitra ny hanangana podcast anao manokana ve ianao? Misy zavatra vitsivitsy hodinihina aloha - izay hampiantranoanao
Fireside: tranokala Podcast tsotra, Hosting ary Analytics
Alatsinainy, Aogositra 28, 2017 Douglas Karr
Mandefa podcast rezionaly voarakitra ao amin'ny Indianapolis Podcast Studio izahay fa tsy te handalo ny olana amin'ny fananganana tranokala, hahazo mpampiantrano podcast, ary avy eo hampihatra ny refin'ny podcast feed. Ny safidy iray dia ny fampiantranoana amin'ny SoundCloud, saingy somary misalasala izahay satria nanakaiky ny fanidiana ry zareo - tsy isalasalana fa tokony hanova ny maodelim-bolany izy ireo ary tsy azoko antoka ny dikan'izany ho an'ny rehetra.
Tsotra: avoaho ny Podcasts anao amin'ny fomba mora
Alakamisy 30 martsa 2017 Zoma, Martsa 31, 2017 Douglas Karr
Toy ny podcaster maro dia nampiantrano ny podcast anay tao Libsyn. Ny serivisy dia manana safidy maro sy fampidirana izay tena mavesatra nefa azo ovaina tanteraka. Tena teknika izahay, na izany aza, matoky aho fa ny ankamaroan'ny orinasa dia hanana fotoana sarotra hamenoana ireo data rehetra ilaina hamoahana podcast tsotra fotsiny. Matetika ny sehatra lova dia manana fananganana lalina toy izany ary tena manakiana fa ny fanavaozana ny traikefan'ny mpampiasa azy dia fanapahan-kevitra mampidi-doza loatra